Akwụkwọ ndị a tụrụ aro - Ụgwọ Ụgwọ Ọrụ
Home Resources Akwụkwọ ndị a tụrụ aro
Anyị na - akwado akwụkwọ Gary Wilson "Brain gị na Intanet Ịntanetị Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na Sayensị na-emepụta ahụ ike"N'ihi na ọ na-akọwapụta sayensị bụ isi na mpaghara a. Ọ dị mma karịsịa na-akọwa Ọganihu nwa na-eto eto n'ụzọ zuru oke na juputara na akụkọ ndi mmadu na aru oru. Ọ na - ewuli elu na okwu TEDx ya na - aga nke ọma Nnwale Ahụhụ Ukwu ahụ nke nwere ihe ngosi 9 nde na YouTube wee sụgharịa ya n'asụsụ 18.
Onye prọfesọ Stanford nke na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Philip Zimbardo (Ọchịchị Mkpọrọ Stanford) ejiriwo Nikita Coulombe rụọ ọrụ mara mma a kpọrọ Man etre - Gịnị Young Men na-adọga na ihe anyị nwere ike ime banyere ya. Owuwu na ya obere ma pithy TED okwu, Ihe Omume nke Guys, Zimbardo na Coulombe wepụtara elekọta mmadụ, akụ na ụba na gburugburu ebe obibi ndị na-akpụzi ụmụ okorobịa taa ma na-ebuga ha nkwụghachi ụgwọ dị mfe dị na ịntanetị.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ihe nkiri eserese ahụ n'ime Ime, ị ga-ahụ nke a n'anya karịa ma ọ dị ntụziaka dị mfe isi neurochemicals na-emetụta anyị omume na àgwà ọma. ọ bụ Ụdị Obi Ụtọ Obi Ụtọ, Mechie Ụbụrụ Gị Iji Mee Ka Serotonin Gị, Dopamine, Oxytocin na Endorphin Levels site n'aka Dr. Loretta Graziano Breuning. Obiọma Loretta ji obiọma nabatara oku na TRF ka ọ gwa ya okwu na The Melting Pot, Edinburgh na June. O juru ụlọ ahụ ma kwupụta okwu ahụ nke ọma.
Tọgharia Nwa Gị Brain - A 4-izu Plan ka End Meltdowns, bulie n'Ule, na agbam ume Social Nkà site n'aka Dr Victoria Dunckley, nwa-ahụike uche. Ọ na-ewere na 80% nke ụmụaka ọ na-ahụ adịghị enwe nsogbu ahụike uche (dị ka ADHD, ịda mbà n'obi, nchekasị, wdg.) A chọpụtawo ha ma tụlee ha. Dr Dunckley achọpụtala na mgbe 3 gaa 4-izu n'iji ngwa ngwa, ihe mgbaàmà nke 'ọrịa ntanetị kọmputa' na-ebelata ma ọ bụ na-apụ n'anya n'ọtụtụ ọnọdụ. Ọ na-akọwapụta sayensi na okwu na-adọrọ adọrọ maka nbibi dijitalụ.
Nke a bụ a ụzọ nke akwụkwọ ọzọ nnọọ nwetara American therapist, Rob Weiss, LCSW, CSAT-S. Anyị mụtara ọtụtụ ihe n'aka Mmekọahụ riri ahụ 101 - a Guide to Healing si Sex, Porn, na Ịhụnanya Addiction. O nwere enyi Nduzi nke Nduzi 24 Nwee Ọhụụ na-eduzi Mmekọahụ Mmekọahụ Iweghachite. O meela nnukwu ọrụ na LGBT + obodo.
Ọ bụrụ na ị bụ ọkà mmụta akparamàgwà mmadụ maọbụ onye ndụmọdụ na-arụ ọrụ na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị karịsịa afọ iri na ụma ị nwere ike inwe mmasị na akwụkwọ a kpọrọ "Otu esi esi na Cyber ​​Pornography Dictionary-Teen Cyber ​​Pornobookbookbook"Site n'aka Christopher Mulligan LCSW. Mulligan bụ onye na-agwọ ọrịa American nke nwere ahụmahụ nke na-emepụta ihe omume mgbake 16. Ọ bụ akwụkwọ a na-ebipụta n'onwe ya ma nwee nkeji ole na ole kama ọ bụ ya bụ nnukwu akụ. Ọ na-adọta ozizi ndị ọkachamara n'ọhịa dịka dọkịta Dr Patrick Carnes na onye nkụzi Dr David Delmonico na Dr Elizabeth Griffin.
Sex, amasị na Social Media - Ịgwa anyị Afọ Iri na Ụma na Digital Age site na Allison Havey na Deana Puccio, (American ma na London) ndị na-emepụta RAP Project. Nke a bụ akwụkwọ a pụrụ ịgụta ọnụ site na nne abua nke ndị na-eto eto 5 nwere ndụmọdụ ndị bara uru maka ndị nne na nna na-ebi ndụ nke ọma taa. Ha na-ekwukwa okwu n'ụlọ akwụkwọ banyere mmetụta nke ịntanetị na-emetụta omume na ọdịmma nke afọ iri na ụma.